Football Khabar » बार्सिलोनाले नेइमार फर्काए सबैभन्दा खुसी डेम्बेले !
बार्सिलोनाले नेइमार फर्काए सबैभन्दा खुसी डेम्बेले !
स्पेनिस बार्सिलोनाले यसै समर सिजनमा आफ्ना पूर्वखेलाडी नेइमार फर्काउन चाहेको चर्चा सरुवा बजारमा चुलीमा छ । सन् २०१७ मा बार्सिलोनाले नेइमारलाई विश्वकीर्तिमानी मूल्य २२२ मिलियन युरोमा फ्रेन्च क्लब पिएसजीलाई बेचेको थियो ।
बार्सिलोनाका अधिकांश खेलाडी फ्रेन्च फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यानभन्दा नेइमारको पक्षमा देखिएपछि नेइमार पुनः स्पेन फर्किने सम्भावना प्रबल छ । यदि नेइमार बार्सिलोना फर्किए पनि सबैभन्दा बढी खुसी हुने कोही खेलाडी छन् भने उनी फ्रेन्च खेलाडी उसामान डेम्बेले हुन् ।
यसको खास कारण छ । २ वर्षअघि जर्मन क्लब बोरुसिया डर्टमुन्डबाट १०५ मिलियन युरोमा बार्सिलोना पुगेका डेम्बेलेले पर्याप्त समय पाएका छैनन् । पटक–पटक चोटबाट गुज्रिनु र फिट अवस्थामा पनि कमै मात्र सुरुआती टिममा परेका उनी मैदानमा पाएको समयसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
यदि यसै समरमा बार्सिलोनाले नेइमार फर्काए उसले ब्राजिलियन मिडफिल्डर फिलिपे कोउटिन्हो र डेम्बेले दुवै खेलाडी बाहिरिन सक्छन् । पछिल्ला रिपोर्टअनुसार पिएसजीले पनि नेइमारसँग कोउटिन्हो र डेम्बेले साट्ने अफर गर्ने भएको छ ।
यदि पिएसजीले यस्तै डिल माने र बार्सिलोनाले डेम्बेले बिदा गर्न तयार भए डेम्बेलेले चाहेको पूरा हुनेछ । किनभने, उनी पिएसजीका केलियन एमबाप्पेसँग एकै क्लबबाट खेल्न चाहन्छन्, जो एकै देशका हुन् ।
केही समयअघि एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै उनले एमबाप्पेसँग एकै क्लबबाट खेल्ने आफ्नो ठूलो इच्छा रहेको बताएका थिए । ठीक यतिबेला बार्सिलोनामा नेइमार फर्किए डेम्बेले पिएसजी पुग्ने बाटो खुलेको छ । डेम्बेले पनि बार्सिलोनाबाहेक पिएसजी जाँदा खुसी हुनेछन् ।
त्यसै पनि, नेइमार बार्सिलोना पुगे डेम्बेलेले खेल्न पाउने समय कटौती हुनेछ । यो अवस्था बुझेका डेम्बेलेले बार्सिलोनामा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देखेका छैनन् । त्यही भएर पनि बार्सिलोनामा नेइमारको आगमन डेम्बेलेका लागि फाइदाको कुरा हुनेछ ।
डेम्बेले यतिबेला बार्सिलोनाजस्तो ठूलो क्लबको जर्सी लगाएर मैदानभन्दा बढी बेन्चमा रहनुभन्दा अन्य क्लबमा गएर पर्याप्त खेल्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रकाशित मिति ६ असार २०७६, शुक्रबार १५:०३